Tonga ny KDE Gear 22.04.1 hanitsy ireo bibikely 100 mahery | ubunlog
Tonga ny KDE Gear 22.04.1 hamaha ny bug 100 mahery amin'ny andiany Aprily 2022
Ny volana aprily lasa teo, KDE Nanomboka izy fanavaozam-baovao lehibe vaovao amin'ny suite-n'ny fampiharana azy. Amin'ny volana Aprily, Aogositra ary Desambra izy ireo no mampiditra dikan-teny vaovao miaraka amin'ny fiasa vaovao, fa ny volana sisa dia manome fanavaozana na fikojakojana. Efa ao anatin'ny volana mey isika izao, midika izany fa tonga ny fotoana hanavaozana ireo izay navoaka mba hanitsiana ny lesoka, ary ora vitsy lasa izay nandefa izy ireo KDE Gear 22.04.1.
Toy ny mahazatra, namoaka lahatsoratra maromaro momba ity famoahana ity ny tetikasa izay manao batisa saika ny rindrambaiko rehetra ao aminy miaraka amin'ny anarana manomboka amin'ny K (ny voalohany dia “Kool”, izay midika hoe “Kool Desktop Environment) no dikan'ny KDE. Ao amin'ny iray amin'izy ireo dia manambara ny fahatongavany izy, raha ny hafa kosa dia manolotra antsika ny kaody loharanon'ny rindrambaiko na manome antsika ny lisitr'ireo fanovana feno.
KDE Gear 22.04.1 dia ny fanavaozana fikojakojana ny May 2022
Amin'ny ankapobeny, mahita ny KDE Gear 22.04.1 Bug 116 no voavaha, maro amin'izy ireo no voapetaka amin'ny Kdenlive. Ny tonian-dahatsoratry ny KDE dia iray amin'ireo programa malaza indrindra, ary izany no iray amin'ireo antony mahatonga azy ireo handinika bebe kokoa azy io noho ny hafa. Ny iray hafa dia nampiditra fanovana maro izy ireo tato anatin'ny taona vitsivitsy, ary ny endri-javatra vaovao dia mila voaporitra ihany koa.
Ny famoahana ny KDE Gear 22.04.1 dia lasa ofisialy androany tolakandro tany Espaina, saingy tsy maintsy manana faharetana kely ianao vao afaka mametraka izany amin'ny ankamaroan'ny fizarana Linux. Efa misy fampiharana vitsivitsy avy amin'ity napetraka ao amin'ny Flathub, ary ho avy tsy ho ela ao amin'ny KDE neon ireo fonosana vaovao rehetra raha mbola tsy nanao izany. Raha toa ka ho tonga any amin'ny Kubuntu 22.04 + Backports PPA izy ireo dia tokony ho eny ny valiny, fa ny KDE matetika dia miandry farafaharatsiny ny fanavaozana teboka faharoa hanosehana azy ireo any amin'ny tahiry Backports.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » dabilio » KDE » Tonga ny KDE Gear 22.04.1 hamaha ny bug 100 mahery amin'ny andiany Aprily 2022
Preview Ubuntu amin'ny WSL: andramo koa ny Ubuntu Daily Build ao anaty Windows
Ny fananganana isan'andro voalohany an'ny Ubuntu 22.10 Kinetic Kudu dia azo alaina izao